Fiheverana voalohany - Geofumadas
CAST - rindrambaiko maimaimpoana ho an'ny famakafakana heloka bevava
Ny fahitana ny firongatry ny lozam-pifamoivoizana sy ny fironana dia olana mahaliana ny fanjakana na governemanta eo an-toerana. CAST no anaran'ny rindrambaiko maimaimpoana, santionany amin'ny Crime Analytics for Space - Time, izay natomboka tamin'ny 2013 ho vahaolana mivelatra amin'ny famakafakana hetsika, miaraka amin'ny lamina ...
Mahazoa mari-pahaizana mpandray anjara avy amin'ny iPad / iPhone
Ny mpandray GPS an'ny fitaovana iOS, toy ny iPad na iPhone, dia mahazo ny fahamendrehana amin'ny filaharan'ny browser hafa: eo anelanelan'ny 2 sy 3 metatra. Ankoatry ny GIS Kit, dia nahita tranga hafa vitsivitsy hanatsarana ny maha-izy azy isika, na izany aza, noho ny fakan-kevitra nataon'ny namana iray, mahaliana anay ny mijery an'ity ...
BlogPad - Editor WordPress ho an'ny iPad
Nahita tonian-dahatsoratra izay nahafa-po ahy tamin'ny iPad aho tamin'ny farany. Na eo aza ny maha WordPress azy ny sehatra fitorahana bilaogy manjaka, izay misy maodely sy plugins avo lenta, dia olana hatrany ny fahasarotana mahita editor tsara. Ho an'ny birao dia mbola tsy mahita zavatra aho. Nanandrana BlogPress, WordPress ho an'ny iOS, Blog Docs, ...
Apple - Mac, Internet sy Blogs, Pirinty voalohany